Fahantrana sy fahalalahan-tanana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Fahantrana sy fahalalahan-tanana
Ao amin’ny taratasiny faharoa nosoratan’i Paoly ho an’ny Korintiana, dia nanome fanoharana faran’izay tsara izy ny amin’ny fomba mahakasika ny fiainan’ny mpino amin’ny fomba azo ampiharina ilay fanomezam-pahasoavana mahatalanjona. “Fa ampahafantarinay anareo, ry rahalahy malala, ny fahasoavan’Andriamanitra izay nomena ny fiangonana any Makedonia” (2 Kor. 8,1). Tsy nanao fitantarana tsy dia misy dikany fotsiny i Paoly, fa tiany ny hamalian’ireo rahalahy sy anabavy korintiana ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny fomba mitovy amin’ny fiangonan’i Tesalonika. Te hanome azy ireo valiny marina sy mahavokatra momba ny fahalalahan’Andriamanitra izy. Nomarihin’i Paoly fa nanana “fahoriana mafy” sy “mahantra indrindra” ny Makedoniana – nefa koa “faly be” (and. 2). Tsy avy amin’ny filazantsaran’ny fahasalamana sy ny harena ny fifalian’izy ireo. Ny fifaliany lehibe dia tsy avy amin’ny fananana vola sy entana betsaka, fa na dia kely aza ny fananany!
Ny fihetsiny dia mampiseho zavatra "avy amin'ny tontolo hafa", zavatra tsy mihoatra ny natoraly, zavatra iray hafa ankoatran'ny tontolo voajanaharin'ny maha-olona tia tena, zavatra iray izay tsy hazavain'ny soatoavin'ity tontolo ity: "Fa faly ny hafaliany rehefa voaporofo fahoriana ary na dia tena mahantra aza izy ireo dia nanome tamin'ny fomba tsotra rehetra »(and. 2). Mahagaga izany! Atambaro ny fahantrana sy ny fifaliana ary inona no azonao? Fanomezana be dia be! Tsy izany no fanomezana isan-jaton'izy ireo. "Fa arak'izay tratry ny heriny no ijoroako ho vavolombelona ary nanome an-tsitrapo mihoatra ny heriny aza izy ireo" (and. 3). Nanome mihoatra ny "antonony" izy ireo. Nanolotra sorona izy ireo. Eny, toy ny hoe tsy ampy izany, “ary nangataka taminay tamin’ny fandresen-dahatra mafy mba hanampiany amin’ny fiantrana sy ny fiombonana amin’ny fanompoana ny olona masina” (and. 4). Tao anatin'ny fahantrany dia nangataka fotoana tamin'i Paul izy ireo hanome zavatra bebe kokoa noho izay mety!
Fa maninona ny Masedoniana no nanao zavatra "ivelan'ity tontolo ity"? Hoy i Paoly: "... fa izy ireo kosa nanolotra ny tenany ho an'ny Tompo aloha, avy eo ho antsika, araka ny sitrapon'Andriamanitra" (and. 5). Nanao izany tamin'ny fanompoana an'ny Tompo izy ireo. Ny sorona nataon'izy ireo dia ho an'ny Tompo aloha. Asa fahasoavana avy amin'ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izany ary hitan'izy ireo fa faly nanao izany izy ireo. Amin’ny alalan’ny famaliana, ny fahafantarana, ny finoana, ary ny fiasan’ny Fanahy Masina ao anatin’izy ireo, satria tsy refesina amin’ny habetsahan’ny zavatra ara-nofo ny fiainana.
Kanefa fantatr’i Paoly fa na manao ahoana na manao ahoana ny omen’ny olona iray, dia tsy misy ilàna azy izany raha toa ka sosotra ny toe-tsaina fa tsy malala-tanana (1. Korintiana 13,3). Noho izany, dia tsy te hampatahotra ny Korintiana hanome amim-pahazotoana izy, fa te hampihatra fanerena kely satria tsy nahavita tsara ny Korintiana ka voatery nilazana fa izany no zava-nisy. “Tsy baiko no ilazako izany; fa noho ny fahazotoan’ny sasany dia mizaha toetra ny fitiavanareo koa aho, na marina izany na tsia » (2 Kor. 8,8).
Amin'izao fotoana izao, ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky dia mandalo fitsapana, na dia fahantrana aza - ary, noho i Jesosy mitoetra ao amintsika, dia afaka ny ho feno fahalalahan-tanana isika. Mahazo misimisy kokoa amin'ny fanomezana isika. Afaka mihoatra ny ambany indrindra isika satria na dia ankehitriny ny fifaliantsika ao amin'i Kristy aza dia mety hihoatra ny fanampiana ny hafa.
Tahaka ny nampiasan'i Paoly ny ohatry ny Makedoniana mba hampiasana ny Korintianina ho amin'ny fahalalahan-tanana, dia efa nilaza ny ohatry ny Korintiana izy mba hanome aingam-panahy ny Masedoniana, izay toa tena nahomby. Malala-tanana ny Makedoniana ka nahafantatra i Paoly fa afaka nanao zavatra betsaka lavitra noho ny teo aloha ny Korintianina. Nefa dia nirehareha tany Makedonia izy fa malala-tanana ny Korintianina. Ankehitriny izy dia naniry ny Korintiana hamita azy. Te hananatra hevitra indray izy. Te hanery ny sasany izy, saingy tiany omena an-tsitrapo ny lasibatra.
«Fa nirahiko ny rahalahy mba tsy ho simba ny reharehanay ny aminareo amin'ity lalao ity, ary mba ho vonona ianareo, araka ny nolazaiko ny aminareo, tsy rehefa hiaraka amiko ny avy any Makedonia ka hahita fa tsy vonona ianareo, izahay , tsy hoe: menatra ianareo noho izao fahatokianay izao. Koa izao aho dia nihevitra fa ilaina ny mananatra ny rahalahy hankeo aminareo mba hamboatra ny fitahiana izay efa nambaranareo rahateo, mba ho vonona ho fitahiana, fa tsy ho amin’ny fitiavam-bola » (and 3-5). ).
Avy eo manaraka andininy iray efa henontsika imbetsaka. “Ny olon-drehetra, araka ny noeritreretiny tao am-pony, tsy amin'ny fisalasalana na noho ny faneriterena; fa ny mpanome sitraka dia tian'Andriamanitra ”(and 7). Ity fahasambarana ity dia tsy midika hoe hafaliana na fihomehezana - midika izany fa mahafinaritra antsika ny mizara ny entantsika amin'ny hafa satria ao amintsika i Kristy. Ny fanomezana dia mahatonga antsika hahatsapa ho tsara. Miasa ao am-pontsika ny fitiavana sy ny fahasoavana ka lasa fifaliana lehibe kokoa ho antsika ny fiainana manome tsikelikely.
“Izay manome voa sy mofo hohanin’ny mpamafy no hanome voa ho anareo koa sy hampitombo azy sy hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo” (and 10). Ity andian-teny farany momba ny fijinjana ny fahamarinana ity dia mampiseho amintsika fa mampiasa sary i Paoly. Tsy mampanantena voa ara-bakiteny izy, fa milaza kosa fa mamaly soa ny malala-tanana Andriamanitra. Omeny azy ireo fa afaka manome bebe kokoa izy ireo.
Izay manan-karena dia tokony hanan-karena amin’ny asa tsara. « Anaro ny mpanankarena amin’izao tontolo izao mba tsy hirehareha, na hanantena harena foana, fa amin’Andriamanitra, Izay manolotra antsika amin’ny haben’ny zavatra rehetra mba hifaliantsika; mba hanao soa, hanan-karena amin’ny asa tsara, ho tia manome, hahasoa” (1 Tim 6,17- iray).
Ry namana, tsy mora ny fiainana. Ny fanekena vaovao dia tsy mampanantena fiainana milamina. Izy io dia manome mihoatra ny 1 tapitrisa: tombom-barotra mihoatra ny 1 tapitrisa ho an'ny fampiasam-bola ataontsika - saingy mety misy traboina manan-danja amin'ity fiainana tsy maharitra ity.
Nampahatsiahy ny Korintiana i Paul fa ny fahalalahan-tanan'izy ireo dia tsy ezaka mahaolona fotsiny fa misy valiny teolojika. Hisaotra an’Andriamanitra ny olona noho izany satria takany fa miasa amin’ny alalan’ny olona Andriamanitra. Mametraka ao am-pon'izay manome mba hanome. Toy izany no nanaovana ny asan’Andriamanitra. "Fa noho io fanompoana mahatoky io dia hidera an'Andriamanitra izy ireo noho ny fankatoavanao ny fanekena ny Filazantsaran'i Kristy sy ny fahatsoranao ny fiombonanao aminy sy izy rehetra" (and 13). Misy teboka marobe manamarika an'io. Voalohany, afaka nanaporofo ny tenany tamin’ny asany ny Korintianina. Nasehon’izy ireo tamin’ny zavatra nataony fa tena nisy ny finoany. Faharoa, ny fahalalahan-tanana dia tsy ny fisaorana fotsiny, fa ny fisaorana [fiderana] an’Andriamanitra koa. Fomba fiankohofana io. Fahatelo, ny fanekena ny filazantsaran’ny fahasoavana dia mitaky fankatoavana ihany koa, ary ny fankatoavana dia midika hoe mizara loharanon-karena ara-batana.